June 21st, 2022 by News Update
June 19th, 2022 by News Update
प्रमिला तामाङ्ग ६ असार , काठमाण्डौं । (फुर्सद र रुचि हुनेले पढिदिनु होला, कतै तपाई पनि यसभित्र पात्रको रुपमा त हुनु हुन्न….) लोकसेवा पास गर्नु जतिकै चुनौती थियो ट्रायल पास गरेर लाइसन्स निकाल्नु, कम्सेकम मेरो लागि। फुर्सद भइन्जेल नतात्तिने मेरो बानी, जैलेई जे मा पनि “जब त राती बुढी ताती”। एक हप्ता अगाडि गएर […]
June 16th, 2022 by News Update
युवापोष्ट २ असार, काठमाडौं । चुरे क्षेत्र एक भुउपयोग, वातावरणीय र जनजिविका आदिका दृष्टिकोणले एक संवेदनशिल क्षेत्र हो । यसको संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित धेरैले क्षेत्रको संरक्षणप्रति चिन्ता तथा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रको अत्यधिक संवेदनशीलता र त्यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा राख्ने गहिरो प्रभाव रहेको छ । चुरे क्षेत्र करिव चार […]
बलत्कार आरोपी मनोज पाण्डेलाई १८ वर्ष कैद सजाय गर्न माग दाबी
युवापोष्ट २ असार, काठमाण्डौं । बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका मनोज पाण्डेविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दुईवटा मुद्दा दर्ता भएको छ । हिजो बुधवार मानव बेचबिखन र बाल यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगा प्रसाद पौडेलले बताए । ८ बर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी युवतीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार […]
June 14th, 2022 by News Update
युवा पोष्ट ३१ जेठ, विराटनगर । अतिरिक्त शुल्क लिएर थप शिक्षक र अन्य सुविधा लिई अंग्रेजी माध्ययम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सहयोग शुल्क उठाउन अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले अभिभावकबाट चन्दा रुवरुप रकम उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो । केही अंग्रेजी माध्ययम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकबाट मासिक रुपमा शुल्क उठाउँदै […]
तपाईले स्मार्ट फोन स्लो चार्ज हुन्छ ? तुरुन्त यी कार्यहरु गर्नुस सुपर फास्ट स्पिडबाट चार्ज हुन्छ ।
May 20th, 2022 by News Update
May 10th, 2022 by News Update
युवापोष्ट २३ वैशाख, काठमाडौं । मलेशियाले कामदारहरुको न्युनतम तलव बृद्धि गरेको छ । यस अघि १२०० मलेसियन रिङ्गेट भएकोमा हाल त्यसलाई बढाएर १५०० मलेसियन रिङ्गेट पुगेको छ । अन्य तलबमान पनि सोही अनुपातमा बृद्धि हुने हुनाले मलेसियामा बैदेशिक रोजगारका लागि गएका नेपालीहरुको पनि तलब बृद्धि हुने भएको छ । यसले देश छोडेर बैदेशिक रोजगारमा गएका […]